Waa kan sirta weyn ee Lewandowski ee guusha - teles relay
Waa kan sirta weyn ee Lewandowski ee guusha
Robert Lewandowski ayaa si sax ah loogu sharfay abaalmarinta FIFA Best Player Award ka dib sanad fiican oo uu seddexleey u dhaliyay Bayern Munich.
Si kastaba ha noqotee, Thiago Cionek, oo ah daafac caalami ah oo reer Poland ah, ayaa sharxaya in ninka ay dhalashada wadaagaan uu leeyahay sir weyn oo had iyo jeer isaga ka dhigeysa mid gaar ah garoonka.
Sacuudi Carabiya ayaa muhaajiriinta ku xirtay "xaalado aad u xun"
32 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Poland ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah. Wuxuu ku hogaaminayaa tartanka Kabta Dahabka isagoo leh 15 gool, taas oo ay tahay in lagu daro seddex kale Champions League. Boolishku wuxuu ku cadyahay jidkiisa guusha: hamiga, shaqada adag iyo cunno shakhsiyeed oo ay qorsheyneyso xaaskiisa Anna. Thiago Cionek, oo ah saaxiibkii hore ee Lewi ee xulka qaranka Poland, ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay cunnooyinka uu cunay laacibka Bayern wareysi uu siiyay ESPN bishii May ee la soo dhaafay.
"Waa nin doonaya inuu naftiisa u horumariyo ciyaaryahan ahaan, sidaas darteed wuxuu heystaa cunto gaar ah oo xaaskiisa ay ku soo rogto isaga. Iyadu waa nafaqo-yaqaan waxayna caan ku tahay Poland. Robert xitaa wuxuu ii sheegay in isbedelka weyn ee ku yimid xirfadiisa, markii uu gaaray kooxaha ugu caansan iyo kooxda qaranka, inay aheyd markii uu si weyn u bedelay wixii uu cunay. Xaaskiisa wax badan ayey ka caawisay, xitaa dhowr ciyaartoy oo xulka qaranka ah ayaa hadda isku cunno ah, ku dhowaad shan ciyaartoy. Waa qaab ka duwan diyaarinta iyo cunista, taas oo aasaas u ahayd isaga. Xerada tababarka Robert wuxuu isku dayaa inuu faa iidooyinkaas u gudbiyo ciyaartoy kale ”, ayuu yiri Cionek.
"Maalinta ciyaarta, wuxuu cunaa borotiin badan. Had iyo jeerna waxaa jira tuunno loogu talagalay quraacda. Ka fogow wax kasta oo ay ku jiraan gluten iyo lactose. Maalinta ka horeysa ciyaarta, casho ka dib, wuxuu mar kale ku sharfayaa baaquli leh bariis cufan si uu jidhkiisa uga buuxiyo kaarbohaydraytyo iyo gulukoos ciyaarta maalinta xigta. Kadib, dib u soo kabashada, khudaarta iyo avokado“, Wuxuu u xaqiijiyaa ninka reer Brazil asalkiisa Polish inuu had iyo jeer ka hadlo ninka ay isku wadanka yihiin
Trump wuxuu ka hadlay Magacaabista Sidney Powell oo ah La-Taliyaha Gaarka ah ee Khiyaanada Doorashada - New York Times
Salah ayaa diiday inuu meesha ka saaro Barca, Real Madrid